Ikhaya | MRU MEDIA
Isaziso Sokusetshenziswa Okufanele
Lawa ma-meteorite aqukethe zonke izakhi ze-DNA
I-Chinese Votive Sword etholwe e-Georgia iphakamisa uhambo lwamaShayina ase-Pre-Columbian oluya eNyakatho Melika
Imibhalo yaseSumeri neyeBhayibheli ithi abantu baphila iminyaka eyi-1000 ngaphambi kukaZamcolo Omkhulu: Ingabe kuyiqiniso?
I-antenna yasendulo etholwe phansi kolwandle lwase-Antarctica: I-Eltanin Antenna
I-Ingá Stone: Umlayezo oyimfihlo ovela emiphakathini yasendulo ethuthukile?
Ngabe itshe lasendulo le-Al-Naslaa lisikwe yi "alien laser"?
Izimfihlo zeHyperborea - Ngabe ososayensi sebevele sebethole impucuko engaqondakali yase-Arctic?
Ososayensi bathi kukhona elinye izwe ngaphansi kweqhwa lase-Antarctica
I-Xolotl - Inja UNkulunkulu wezinganekwane zama-Aztec eziqondisa abafileyo kwabaphansi
I-Atacama Skeleton - Umama womuntu ophelele omude ongu-15cm
UPedro: Umama wasentabeni ongaqondakali
Abomdabu baseMelika bathi izintaba zasePryor zihlala ekhaya labantu abangaqondakali (abafana ne-hobbit)!
Izinto zakudala ezazitholakala eMexico zazizofakazela ukuthintana kwamaMeya nabafokazi
Kuyadabukisa, kuyamangaza, futhi okunye akuxazululiwe: 44 kokufa okungajwayelekile emlandweni
Ama-Clouds Warriors: Amandla angaqondakali wesiko leChachapoya elahlekile
I-Houska Castle: Indaba ethi "isango eliya esihogweni" akuyona eyabantu ababuthakathaka!
Ososayensi bathola uhlelo oludidayo lwamaplanethi ayisithupha okukhanya okukude ngeminyaka engu-200
Ukulahleka komgodi omnyama ngokuphindwe kayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi kuneLanga
Ososayensi abafuna abafokazi bathola isignali ye-ET engaqondakali evela eProxima Centauri
Imfihlakalo yaseTunguska, isibhakabhaka esashaya iSiberia ngamandla amabhomu ama-athomu angama-300 ngaphandle kokulandela!
Imfihlakalo yeMars iyajula njengoba amasiginali ayo angajwayelekile e-radar atholakele engewona awamanzi: Yini eyakha iRed Planet?
Okuthusayo kwesilingo 'sokulala saseRussia'
Amatshe Esibhakabhaka asePitoni: Ngabe izindawo ezingaphandle komhlaba zavakashela eNtshonalanga Afrika eminyakeni eyizinkulungwane eyedlule?
Ama-Klerksdorp spheres - Amabhiliyoni weminyaka ubudala amatshe angajwayelekile ase-Ottosdal
Ukunyamalala kukaTara Calico: kudlule amashumi amathathu eminyaka kepha imfihlakalo ebangela usizi yesithombe "se-polaroid" ihlala ingaxazululiwe
UMpuluzi Batholith: Kutholakale 'umdondoshiya' oneminyaka engu-200 million eNingizimu Afrika
UGil Pérez - indoda engaqondakali okuthiwa yathunyelwa ngocingo isuka eManila iya eMexico!
Ukufa okungaqondakali kukaKaren Silkwood: Kwenzekeni ngempela ngempempe yePlutonium?
Ukufa okungaqondakali kukaStanley Meyer - Indoda eyasungula 'imoto ephehla amanzi'
Umfana oseBhokisini: 'Ingane yaseMelika Engaziwa' namanje ayaziwa
Izinyathelo odongeni: Ingabe ama-dinosaur empeleni ayekhuphuka amawa eBolivia?
I-Kummakivi Balancing Rock kanye nencazelo yayo engenakwenzeka ngenganekwane yesi-Finnish
Bhalisela Izincwadi Zethu Zezindaba
Yaziswa ngokuthunyelwe okuhamba phambili masonto onke.
Ngokuthikha leli bhokisi, uyaqinisekisa ukuthi ufundile futhi uyavumelana nemigomo yethu yokusebenzisa maqondana nokugcinwa kwemininingwane ethunyelwe ngaleli fomu.
Sisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu ngokukhumbula okuthandayo nokuphinda ukuvakasha. Ngokuqhubeka upheqa isiza sethu, uyavuma ukusetshenziswa kwawo wonke amakhukhi.
Funda kabanziVala uphinde wamukele ⟶